I-OOG-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>Logistics Projekthi>EYE
I-OOG (Out Of Gauge) yigama elifushane lazo zonke iziqukathi ezisetshenziswa ngokweqile noma iziqukathi ezingezona ezejwayelekile, ikakhulukazi kufaka phakathi: isitsha sokuvula esivulekile, isitsha se-rack flat (noma isiqukathi sohlaka),
isitsha se-reffer, isigqoko sehanger hanger kanye ne-tank container.
Ama-Sohologistics enza uhlelo olusindayo lokuhamba kwemithwalo yezimpahla lweprojekthi ngokusho kwe-Open top container kanye ne-flat rack container
I-Open Top Container （(eyaziwa ngokuthi i-OT ngamafuphi） uhlobo olulodwa lwe-OOG.
Njengoba igama lisho, ingaphezulu yalolu hlobo lwesitsha luvulekile, engahlukaniswa izinhlobo ezimbili ze-OT kanzima ne-OT ethambile ngenxa yempahla ephezulu ephezulu.
I-Hard OT inophahla lwensimbi olungonakalisi ngaphezulu ngenkathi i-OT ethambile inemishayo ekhiphekayo nogwegwe ongaweleki ngaphezulu,
I-OT ilungele ukuthutha ama-cargos asindayo aphezulu.
Ngokusho kwama-liners ahlukene wokuhambisa, ama-cargos angenamagama angaphezu kuka-4m amukelekile.
Isitsha se-Flat Rack, esivame ukubizwa ngokuthi isitsha sohlaka noma isitsha se-FR.
Isitsha sohlaka sisuselwa esitsheni esivamile esisuswe ophahleni oluphezulu namabhodi odonga aseceleni.
Ngenkathi kwesinye isikhathi i-wallboard board isisuswa nayo, kukhona kuphela ipuleti engezansi esele nezinsika ezi-4 zekona, siyibiza ngokuthi yi-flat rack container.
Iziqukathi ze-FR zibamba iqhaza elibalulekile kokuhamba kweziqukathi ezingejwayelekile - ipuleti lazo elingaphansi ukuze kufezeke umthamo wokulayisha. It ikakhulu ithwala cargos of over-ubude, obubanzi, over-ukuphakama super imishini enkulu noma imishini noma cargos esindayo.
Ngokuya ngamazinga ahlukene womkhumbi, ama-cargos angenobubanzi obungu-4.5m, ukuphakama okungama-4m amakhulu kwamukelekile. Futhi ngobude, Kufanele kube ngaphakathi kwe-15m ngokusho kwesisindo somthwalo. Ngaphandle kwalokho, lalela ukuthi ikhathuni elingaphezu kobude alikwazi ukuvimba iphuzu lokuphakamisa isitsha kuzo zombili izinhlaka zokuphakamisa (ukuphakamisa ibanga phakathi kwe-2.08m)
Ama-cargos adinga ukungangeni manzi kanye nokuthambisa lapho kulayishwa esitsheni uma kunesidingo ngoba isitsha sokumboza esinamafulege ngokuvamile siba ngamazinga aphezulu ezikejana zomkhumbi ezingabekwa uphawu.
IZIPHUMA ZESIFUNDO SE-GAUGU-CONTrateER
Uhlobo 箱箱 内部 尺寸
ubude ububanzi Ukuphakama ububanzi Ukuphakama ububanzi Ukuphakama Ubukhulu obukhulu I-Tare Ukulayisha okungaphezulu kukaMax
Ama-Sohologistics abambisana ngokubambisana isikhathi eside nama-liners amaningi adumile afana ne-MSK, ZIM, YML, CSCL, WHL, KMTC ne-CMA emhlabeni. Ama-SHL anezinzuzo ekusebenzeni okusheshayo kwezingcaphuno futhi akhonza wonke amakhasimende ngamusa.
Umthamo wonyaka wokuthumela kanye nokungenisa wokusebenza kwe-OOG kungaphezu kwama-800pcs amboza imbobo esezingeni lomhlaba jikelele. I-SHL futhi inezinsizakalo zokubhuka,
Isisekelo sokuqinisa nokuqinisa i-OOG
1.Umgomo wokubopha nokuqinisa okusebenzayo phakathi kwezimpahla nesitsha ukuvikela impahla ukuthi ingangeni kuzinhlangothi zombili zesiqukathi sohlaka noma ukushelela kuzinhlangothi zombili (gxuma) ngesikhathi sokuhamba ngomkhumbi nangokuhamba ngomkhumbi ukugwema noma ikuphi ukulimala kwe-cargos .
2.Akunqatshelwe ukubeka omunye umkhawulo we-baffle (i-Rack) yesitsha sohlaka ngenkathi ubeka omunye umkhawulo phansi. Zombili iziphetho zenkimbinkimbi kufanele zakhiwe noma zibekwe phansi ngasikhathi sinye.
3.I-cargos kufanele ihlelwe ngokulingene esitezi sokhuni lwesiqukathi sezinhlaka ngokuya ngesisindo. Musa ukubeka uxinzelelo olwengeziwe ngakolunye uhlangothi. Ukubopha nama-wedge kufanele kusetshenziselwe ukuvikela ama-cargos ekunqobeni nasekuhambeni kwe-longitudinally nhlangothi zombili.
Yehlisa maphakathi namandla adonsela phezulu uma isikhungo samandla adonsela phansi siphakeme kakhulu.
I-4.Alala iyadingeka phakathi kwe-cargos kanye naphansi kwesitsha sohlaka ukuze kukhuliswe ukugcwala kokuqina. Ukusekelwa kufanele kugcwaliswe phakathi kwama-cargos nama-baffles emikhawulweni yomugqa wesikebhe ukuvikela ukunyakaza okude.
5.Kuvinjelwe ukumboza izingxenye ezine ze-Corner Casting zesithako sohlaka yi-cargos noma ukuqiniswa, okungukuthi, Amaphoyinti Okuphakamisa; Igebe phakathi kwe-cargos nokuxaka isitsha sohlaka kufanele kugcine okungenani i-30cm, kanye nokubopha nokuhlanganisa ukuqiniswa kuzoba yisejwayelekile, uma kungenjalo imishini eseceleni ingeke iphakamise la ma-cargos asindayo.
I-6.Umthwalo wamaphoyinti ngamunye wokuqinisa kuzo zombili izinhlangothi zesitsha sohlaka uvame ukuba ngamathani ayi-5.
Ukuhlanganiswa kufanele kugwenywe ukugxila kwenye yamaphuzu wokuqinisa.
7.Kwenqatshelwe ukusebenzisa izipikili zensimbi ukushayela abalalayo noma ama-wedges enkuni angena phansi kokhuni lwesiqukathi sohlaka, ukuze kugwemeke ukulimala esitsheni sohlaka futhi kunciphise umthamo wokulayisha.
8.Intambo yokuqhuma kwentambo noma ibhande lokuqhuma le-nylon kufanele ligcinwe lisesimweni esiqinile ngokuphelele, intambo yocingo kufanele ifakwe nge-othomathikhi yokujikisa futhi ibhande lokuqhuma le-nylon kufanele lifakwe nge-ratchet ephikisayo.
9.Amaphilisi okuvikela kufanele asetshenziselwe ukuxhumeka phakathi kwentambo yocingo noma ibhanti le-nylon lokubopha ne-cargos. Ngokuvamile zenziwa ngezinto zepulasitiki (iphepha lokuphepha alivumelekile ukusetshenziswa). Kumakhathuni anjenge-coil yensimbi, ukuhlangana phakathi kwentambo yensimbi egcotshwe kahle kanye ne-cargos kuzombozwa ngehose yepulasitiki enjoloba njengamaphampu wokuvikela.
10.Isitsha sokubeka okuyisicaba, kufaka phakathi lapho amabhalethi efakwa emaphethelweni womabili, singagxotshwa kuphela emphemeni wesikebhe ngokuya ngokomkhuba wezwe lonke njengendawo yokuphakamisa (okungukuthi, ukuphonsa ekhoneni) ivinjelwe ngu i-cellguide esitsheni.
Ama-Rack angama-Flatible Flat Racks
Imikhawulo yama-Flat Racks
20'Vula Isengezo Esiphezulu
40'Vula Isengezo Esiphezulu
Ukucaciswa Kwezindawo ezivulekile